Soo saaraha Daabacaadda Kaadhka Ciyaaraha ee Guddiga gaarka ah | HS Boardgame Daabacaadda
HS waxa ay bixinaysay daabacaadda iyo baakaynta ciyaarta looxa ilaa 2002dii.
Baakadaha Ciyaarta guddiga
Daabacaadda Buugga Sawirka
Baakadaha Sanduuqa Warqadda
Baakadaha xirfadleyda 18 sano iyo soo saaraha ciyaarta guddiga gaarka ah
Alaabooyinka ugu waaweyn
Naqshad la habeeyay ee daabacaadda iyo baakaynta alaabta, samee xidhmo gaar ah sawirka astaantaada oo kor u qaad suuq-gaynta alaabtaada. Shirkadda daabacaadda ee HS Boardgame waxay leedahay in ka badan 40 kooxood oo naqshadeynta baakadaha khibrad u leh, in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah, oo ku habboon baahiyahaaga, kaliya badeecadaada gaar ah u habeynta gaarka ah, diiday inay u ekaato, alaabada lagu iibiyo Japan, Jarmalka, Mareykanka iyo kuwa kale dalalka, saamaynta design ayaa si weyn loo aqoonsaday.
Hongsheng, Sida mid ka mid ah daabacaadda kaararka gaarka ah ee ugu wanaagsan iyo soo saaraha ciyaarta guddiga gaarka ah ee Shiinaha, Inta badan ku takhasusay daabacaadda ciyaarta guddiga, daabacaadda buugaagta sawirada, daabacaadda buugaagta saddex-geesoodka ah, agabka elektaroonigga ah ee waxbarashada carruurta, agabka waxbarashada, sanaadiiqda midabka boutique, iyo sare- dhamaadka sanduuqyada hadiyadaha iwm, xirfad leh si ay u siiyaan macaamiisha alaabooyin kala duwan oo daabacan.
OEM Dawaarle Sameeyay Ciyaarista Kaarka Ciyaarta Daabacaadda Gaarka ah ee Ciyaarta Guddiga Qoyska
Ilaa 2002, sida tooska ah iyo xirfadlaha OEM/ODM soo saaraha iyo dhoofiyaha ee Shiinaha, HongSheng Manufactory oo ku takhasusay soo saarista ciyaaraha looxa, ciyaaraha kaadhka, kaararka ciyaarta, qaybaha ciyaarta iyo sanduuqa baakadaha.
Daabacaadda Hongsheng - Tayada Sare ee Khaaska ah ee PET-da ee daah-furnaanta sanduuqa baakooyinka taleefanka ee leh caag balaastig ah oo aan la ururin
Inta badan, muuqaalka sanduuqa waraaqaha, sifooyinka, baakadaha, iwm. waxay noqon karaan arrimaha muhiimka ah ee soo jiidanaya macaamiisha. Habka horumarinta daabacaadda ciyaarta looxa, daabacaadda sanduuqa midabka, sanduuqa waraaqaha, buug, naqshadeeyayaashayadu waxay la socdeen isbeddelkii ugu dambeeyay iyo falanqaynta dhadhanka macaamiisha, sidaas darteed, samaynta daabacaadda ciyaarta guddiga, daabacaadda sanduuqa midabka, sanduuqa warqadda, buug gaar ah qaab dhismeedkeeda iyo qaabka naqshadeeda. Dhanka sifooyinkeeda, waxaan isku dayeynaa inaan ka dhigno mid heer sare ah anagoo qaadanayna agab cayriin oo heer sare ah.
Daabacaadda Hongsheng - Sanduuqa qiimaha warqadda gaarka ah ee tayada sare leh sanduuqa baakadaha telefoonka gacanta ee soo saaraha warqadaha daabacaadda sanduuqa warqadaha gaarka ah
Sanduuqa qiimaha xaashida gaarka ah ee tayada sare leh sanduuqa sanduuqa gacanta ee tayada sare leh ee soo saaraha daabacaadda waraaqaha ayaa kasbaday dareenka sare iyo ammaanta macaamiisha. Tiknoolajiyada waxaa lagu dabaqaa si ay si fiican u buuxiso baahida suuqa. Waxa hubaal ah inay buuxin doonto dabeecadda iyo dhadhanka gaarka ah ee macaamiisha.
Daabacaadda Hongsheng - Ciyaarta gudaha caada ah oo tayo sare leh iyo kaararka CMYK ee daabacaadda carruurta iibka kulul
Nuxur ahaan, daabacaadda ciyaarta looxa, daabacaadda sanduuqa midabka, sanduuqa waraaqaha, waxqabadka buugaagta iyo tayadeeda waxaa inta badan go'aamiya agabkeeda cayriin. Marka la eego alaabta ceeriin ee Ciyaarta Guddiga, waxay soo mareen tijaabooyin badan oo ku saabsan qaybahooda kiimikada iyo waxqabadkooda. Sidan, tayada alaabta ayaa laga dammaanad qaadayaa isha. Waqtigan xaadirka ah, badeecada waxaa lagu tijaabiyay inay tahay mid aad u wanaagsan iyo waxyaabo kale.
Hongsheng Custom Board Game Card Soo saaraha Daabacaadda
Samee sawir calaamad gaar ah oo baakadahaaga ah, hagaaji awoodda suuqgeynta alaabta.
Waxaan leenahay in ka badan 40 kooxaha naqshadeynta baakadaha khibrad iyo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo warshadaha. Waxaan u habayn karnaa alaabtayada hadba baahidayada. Anagu adiga uun baan kuu samaynaynaa. Waxaan diidnay inaan isku mid noqonno.
Alaabooyinka waxaa si fiican loogu iibiyaa Japan, Germany, US iyo wadamo kale, saameynta naqshadeynta ayaa si weyn loo aqoonsaday.
Diirada saarida daabacaadda kaadhka ciyaarta guddiga gaarka ah iyo baakaynta 19 sano, shirkadda wax-barashada ee Japan waxay magacawday lammaane. Xarunta Dongguan waxay leedahay 8,500 mitir oo laba jibbaaran oo ah dhismayaal warshadeed oo xooggan iyo in ka badan 300 oo shaqaale xirfad iyo farsamo ah. Bishii Sebtembar 2017, laanta Huizhou, oo daboolaysa dhul ka badan 20,000 mitir oo laba jibbaaran, ayaa si rasmi ah loo hawlgeliyay. Ku guuleystey abaalmarino badan sida "Alaab-qeybiye heer sare ah oo ka tirsan gobolka Guangdong", "Shahaadada Qiimaynta alaab-qeybiyaha", "Abaalmarinta Tobanka Tobanka Sarreysa ee Maamulaha Degmada Guangzhou", "Abaalmarinta Tobanka Sarreysa ee Siddeedaad ee Sare", U hoggaansanaanta nidaamka maareynta tayada ISO9001 ee shirkadda shahaado bixinta.
HAMA iyo shirkadeena waxay gaadheen heshiis iskaashi oo wakhti dheer ah
Hongsheng waxay ku siinaysaa daabacaadda kaadhadhka ciyaarta guddiga gaarka ah ee gaarka ah iyo xalka baakadaha!
Tan iyo markii la aasaasay 2001, shirkadda daabacaadda HS boardgame waxay ku salaysan tahay mabda'a "macmiilka ugu horreeya, tayada ugu horreysa; heer sare, horumar joogto ah." Iyada oo ku saleysan suuqa, waxay ku kasbatay kalsoonida iyo taageerada macaamiisha qaybaheeda kala duwan. La aasaasay nidaamka tayada kaamil ah ee 2009, maray ISO9001: 2015 shahaado nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah, ballaariyey ay miisaan in 2010 si ay u daboosho aag of 8,500 mitir oo laba jibbaaran, furay laan ee Huizhou ee 2017, daboolaya meel of 30,000 mitir oo laba jibbaaran, iyo hadda waxa uu leeyahay oo ku saabsan 600 oo shaqaale ah , Waxaa jira 3 qaybaha ganacsiga: guddiga ciyaarta ganacsiga waaxda, waxbarashada carruurta ee alaabta elektarooniga ah ganacsiga, waaxda ganacsiga baakadaha boutique.
Baaxadda ganacsiga daabacaadda: ciyaaraha looxa, buugaagta sawirada, buugaag saddex-geesood ah, carruurtu-ku-ciyaaradaha elektiroonigga ah ee waxbarashada, agabka waxbarashada, sanaadiiqda midabka boutique, sanaadiiqda-hadyada-dhamaadka sare, si xirfad leh macaamiisha u siiya alaabooyin daabacan oo kala duwan. Qalabka wax soo saarka: Mashiinka daabacaadda Heidelberg, mashiinka saliidda, mishiinka polishing, mishiinka laminating, mashiinka biirka, mashiinka wax lagu dubo, SMT, mishiinka xidhidhka silig, mishiinka finanka, mashiinka dhijitaalka ah, goynta sariirta, mashiinka isku laabma, iwm Hubinta tayada: oo leh go'an buuxa ee qalabka tijaabada tayada iyo koox farsamo xirfadeed si loo hubiyo tayada alaabta daabacaadda macaamiisha.